देहधारणको रहस्य (४) (भाग एक) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तिमीहरूलाई बाइबलको पृष्ठभूमिको कथा र यसको निर्माणको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ। यो ज्ञान ती व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा हुँदैन जसले परमेश्‍वरको नयाँ कामलाई ग्रहण गरेका छैनन्। तिनीहरूलाई थाहा छैन। यदि तँ तिनीहरूसँग सारका यी विषयहरूमा स्पष्टसँग कुरा गर्छस् भने, तिनीहरूले उप्रान्त तँसँग बाइबलको बारेमा त्यत्ति कुरा गर्नेथिएनन्। तिनीहरू अगमवाणी गरिएको कुरालाई लगातार खोतलिरहन्छन्: के यो भनाइ पूरा भएको छ? के त्यो भनाइ पूरा भएको छ? तिनीहरूले सुसमाचारलाई बाइबलअनुसार ग्रहण गरेका हुन्छन्, र तिनीहरूले बाइबलअनुसार नै सुसमाचार प्रचार गर्छन्। परमेश्‍वरमाथि तिनीहरूले गरेको विश्‍वास बाइबलका वचनहरूमा आधारित हुन्छ; बाइबलविना, तिनीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेछैनन्। तिनीहरू यसरी बाइबलका स-साना कुराहरू जाँच्दै यस्तै प्रकारले जिउँछन्। जब तिनीहरू एक पल्ट फेरि बाइबल खोतल्छन् र तँलाई स्पष्टीकरणका लागि सोध्छन्, तँ भन्छस्, “पहिले, हामी प्रत्येक भनाइको सत्यता प्रमाणित नगरौं। त्यसको साटो, पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ सो हेरौं। हामी हिँडेका मार्गलाई लिऔं, र त्यसलाई सत्यतासँग तुलना गरौं, कि यो मार्ग साँच्चै पवित्र आत्माको काम हो कि होइन हेरौं, र हामी पवित्र आत्माको काम प्रयोग गरी त्यो मार्ग सही छ कि छैन भनेर जाँचौं। यो भनाइ वा त्यो भनाइ अघिबाटै भनिएझैँ पूरा हुनआएको छ कि छैन भन्ने कुराचाहिँ हामी मानिसले पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहुँदैन। त्यसको साटो हामीले पवित्र आत्माको काम र परमेश्‍वरले हालमा गरिरहनुभएको कामको बारेमा कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ।” बाइबलमा भएका अगमवाणीहरू अगमवक्ताहरूको समयमा दिइएका परमेश्‍वरका वचनहरू हुन् र ती परमेश्‍वरले प्रयोग गर्नुभएका मानिसहरूले प्रेरणा प्राप्‍त गरेपछि लेखेका वचनहरू हुन्; यी परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ले मात्र यी वचनहरूलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, र केवल पवित्र आत्माले ती वचनहरूको अर्थ प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, र केवल परमेश्‍वर आफैले मात्र ती सात वटा मोहोर तोड्न र चर्मपत्रको मुट्ठो खोल्न सक्नुहुन्छ। तँ भन्छस्: “तपाईं परमेश्‍वर हुनुहुन्न, न त म नै हुँ। त्यसोभए, कसले हल्कासाथ परमेश्‍वरको वचनको व्याख्या गर्ने आँट गर्छ? के तँ अझै यी वचनहरूलाई व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्छस्? यर्मिया, यूहन्ना र एलिया अगमवक्ताहरू आए भने पनि उनीहरूले समेत ती वचनहरू बोल्ने र तिनको व्याख्या गर्ने आँट गर्नेथिएनन्, किनकि तिनीहरू थुमा होइनन्। केवल थुमाले मात्र सात मोहोर तोड्न र चर्मपत्रको मुट्ठो खोल्न सक्नुहुन्छ, र अरू कसैले पनि उहाँको वचनको व्याख्या गर्न सक्दैन। म परमेश्‍वरको नाउँ खोस्ने हिम्मत गर्दिनँ, उहाँका वचनहरूको व्याख्या गर्ने कोसिस गर्ने त कुरै नगरौं। म त्यो व्यक्ति मात्र हुन सक्छु जसले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्दछ। के तपाईं परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? परमेश्‍वरका कुनै पनि प्राणीहरूले त्यो चर्मपत्रको मुट्ठो खोल्ने वा ती वचनहरूको व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्दैनन्, र म पनि तिनको व्याख्या गर्ने आँट गर्दिनँ। तपाईंले तिनको व्याख्या गर्ने कोसिस नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। कसैले पनि तिनको व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नुहुँदैन। हामी पवित्र आत्माको कामको बारेमा कुरा गरौं; मानिसले यति मात्र गर्न सक्छ। मलाई यहोवा र येशूको कामको बारेमा थोरै मात्र थाहा छ, तर मलाई यस्तो कामको कुनै व्यक्तिगत अनुभव नभएको कारण, म यसको बारेमा केही हदसम्म मात्र कुरा गर्न सक्छु। यशैया वा येशूले उहाँहरूको समयमा बोल्नुभएका वचनहरूको अर्थको बारेमा म कुनै स्पष्टीकरण दिनेछैनँ। म बाइबलको अध्ययन गर्दिनँ, बरु म त परमेश्‍वरको वर्तमान कामको अनुसरण गर्दछु। तपाईंले वास्तवमा बाइबललाई सानो चर्मपत्रको मुट्ठो रूपमा हेर्नुहुन्छ, तर के यो केवल थुमाले मात्र खोल्न सक्ने वस्तु होइन र? थुमाबाहेक, अरू कसले यो खोल्न सक्छ र? तपाईं थुमा हुनुहुन्‍न, मैले म आफै परमेश्‍वर हुँ भनि दाबी गर्ने आँट गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यसैले हामी बाइबलको विश्लेषण नगरौं वा यसका स-साना कुराहरूको जाँच नगरौं। पवित्र आत्माले गर्नुभएको कामको, अर्थात् वर्तमानमा परमेश्‍वर आफैले गर्नुभएको कामको बारेमा छलफल गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। परमेश्‍वरले कुन-कुन सिद्धान्तहरूद्वारा काम गर्नुहुन्छ, र उहाँको कामको सार के हो सो हेरौं अनि, यसलाई प्रयोग गर्दै के आज हामी हिँडेको मार्ग सही छ कि छैन सो जाँचौं, र त्यसरी यसलाई निश्चित गरौं।” यदि तिमीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छौ भने, विशेष गरी धार्मिक संसारमा हुनेहरूलाई प्रचार गर्न चाहन्छौ भने, तिमीहरूले बाइबललाई बुझ्नुपर्छ र त्यसको भित्री कथालाई राम्ररी जान्नुपर्छ; अन्यथा, तेरो निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्ने कुनै उपाय छैन। तैंले समग्र चित्रलाई राम्ररी बुझेर बाइबलका मृत शब्दहरूलाई एक-एक गरी जाँच्न बन्द गरिस्, अनि परमेश्‍वरको काम र जीवन सत्यताको बारेमा मात्र कुरा गरिस् भने, तैंले साँचो हृदयले खोजी गर्नेहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नेछस्।
यहोवाको काम, उहाँले राख्नुभएका व्यवस्थाहरू, र उहाँले मानिसहरूलाई जीवन जिउन डोऱ्याउनको लागि प्रयोग गर्नुभएका सिद्धान्तहरू, व्यवस्थाको युगमा उहाँले गर्नुभएको कामको विषयवस्तु, उहाँले आफ्नो व्यवस्थालाई स्थापित गर्नुको महत्त्व, अनुग्रहको युगका निम्ति उहाँले गर्नुभएको काम र परमेश्‍वरले यस अन्तिम चरणमा गर्नुहुने कामको महत्त्व: तिमीहरूले बुझ्‍नैपर्ने कुराहरू यिनै हुन्। पहिलो चरण व्यवस्थाको युगको काम हो, दोस्रो अनुग्रहको युगको काम र तेस्रो आखिरी दिनहरूको काम हो। तिमीहरू परमेश्‍वरको कामका यी चरणहरूको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म, जम्‍मा तीन चरणहरू छन्। कामको प्रत्येक चरणको सार के हो? छ हजार वर्षको प्रबन्ध योजनाको काममा कति वटा चरणहरू पूरा गरिन्छ? यी चरणहरूलाई कसरी पूरा गरिन्छ र किन प्रत्येकलाई त्यसको आफ्नै तरिकामा गरिन्छ? यी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। प्रत्येक युगको कामको प्रतिनिधिमूलक महत्त्व छ। यहोवाले कुन काम गर्नुभयो? उहाँले त्यो किन विशेष तरिकाले गर्नुभयो? उहाँलाई किन यहोवा भनियो। फेरि, अनुग्रहको युगमा येशूले कुन काम गर्नुभयो र कुन तरिकामा त्यो गर्नुभयो? परमेश्‍वरको स्वभावको कुन पक्षहरूलाई कामको प्रत्येक चरण र प्रत्येक युगले प्रतिनिधित्व गर्दछ? उहाँको स्वभावका कुन-कुन पक्षहरूलाई व्यवस्थाको युगमा प्रकट गरिएका थिए? र अनुग्रहको युगमा कुन-कुनलाई प्रकट गरिएका थिए? र अन्तिम युगमा कुन-कुनलाई प्रकट गरियो? यी सारगत प्रश्नहरू हुन्, जुन विषयमा तिमीहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। परमेश्‍वरको सम्पूर्ण स्वभाव छ हजार वर्षको व्यवस्थापन योजनाको क्रममा प्रकट भएको छ। यो अनुग्रहको युगमा मात्र प्रकट भएको छैन, न त व्यवस्थाको युगमा मात्र प्रकट गरिएको छ, आखिरी दिनहरूमा मात्रै यसलाई प्रकट गरिएको छ भन्‍ने कुरा त परै जाओस्। आखिरी दिनहरूमा गरिएको कार्यले न्याय, क्रोध र सजायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। आखिरी दिनहरूमा गरिएको कामले व्यवस्थाको युगको वा अनुग्रहको युगको कामको स्थान लिन सक्दैन। यद्यपि, यी तीन चरणहरू एकसाथ जोडिएका छन्, एउटै अस्तित्वमा छन्, र सबै एउटै परमेश्‍वरका काम हुन्। स्वाभाविक रूपमा, यस कामको कार्यान्वयनलाई अलग-अलग युगहरूमा विभाजित गरिएको छ। आखिरी दिनहरूमा गरिएको कामले सबै कुराको अन्त्य गर्दछ; व्यवस्थाको युगमा गरिएको काम सुरुवातको काम थियो; अनि अनुग्रहको युगमा गरिएको काम छुटकाराको काम थियो। छ हजार वर्षको व्यवस्थापन योजनाको कामका दर्शनहरूको कुरा गर्ने हो भने कसैले पनि त्यसको अन्तर्दृष्टि वा समझ प्राप्त गर्न सक्दैन, र यी दर्शनहरू पहेलीहरू नै रहन्छन्। आखिरी दिनहरूमा, राज्यको युगलाई प्रारम्‍भ गर्नका लागि वचनको काम मात्र गरिन्छ, तर यसले सबै युगको प्रतिनिधित्व गर्दैन। आखिरी दिनहरू आखिरी दिनहरूभन्दा बढी केही होइनन्, र परमेश्‍वरको राज्यको युगभन्दा बढी होइनन्, र तिनले अनुग्रहको युग वा व्यवस्थाको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यति मात्र हो, कि आखिरी दिनहरूमा, छ हजार वर्षे व्यवस्थापनको योजनाका सबै काम तिमीहरूलाई प्रकट गरिएको छ। यो रहस्यको घुम्टो उठाउनु हो। यस प्रकारको रहस्य कुनै मानिसले प्रकट गर्न नसक्‍ने कुरा हो। मानिससँग बाइबलसम्बन्धी ज्ञान जति नै धेरै भए पनि त्यो वचनहरू भन्दा बढी केही हुँदैन, किनकि मानिसले बाइबलको सारलाई बुझ्दैन। बाइबल पढ्दा मानिसले केही सत्यता बुझ्न सक्छ, केही वचनको व्याख्या गर्न सक्छ, वा केही प्रसिद्ध खण्डहरू र अध्यायहरूमाथि सूक्ष्म जाँच गरेको हुनसक्छ, तर उसले ती वचनहरूभित्र रहेको अर्थ कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैन, किनकि मानिसले देख्‍ने भनेका मृत शब्दहरू मात्र हुन्, यहोवा र येशूको कामको दृश्य देख्दैनन्, र मानिससँग यस कामको रहस्य पत्ता लगाउने कुनै तरिका हुँदैन। त्यसकारण, छ हजार वर्षे व्यवस्थापन योजनाको रहस्य सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो, यसलाई सबैभन्दा गहिराइमा लुकाइएको छ, र यो मानिसका निम्ति पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकिने छ। परमेश्‍वर आफैले मानिसलाई नबताउञ्जेल र प्रकट नगरुञ्‍जेलसम्‍म कसैले पनि परमेश्‍वरको इच्छा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दैन; अन्यथा, यी कुराहरू मानिसका निम्ति सधैँ रहस्यको कुरा बन्नेछन्, सधैँका लागि मोहोर लगाइएका रहस्यहरू रहनेछन्। धार्मिक संसारमा हुनेहरू सबैको कहिल्यै वास्ता नगर; यदि आज तिमीहरूलाई नबताइएको भए तिमीहरूले पनि यो बुझ्‍ने थिएनौ। छ हजार वर्षको यो काम अगमवक्ताहरूका सबै अगमवाणीहरूभन्दा धेरै रहस्यमय छ। सृष्टिदेखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो रहस्य यही हो, र युगौँ युगका अगमवक्ताहरूमध्ये कसैले पनि यसलाई बुझ्न सकेको छैन, किनकि यो रहस्यलाई अन्तिम युगमा मात्र प्रकट गरिन्छ र यसभन्दा अघि यसलाई कहिल्यै प्रकट गरिएको छैन। यदि तिमीहरू यस रहस्यलाई बुझ्न सक्छौ भने, र तिमीहरूले यसलाई सम्पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौ भने, सबै धार्मिक व्यक्तिहरू यो रहस्यद्वारा परास्त हुनेछन्। सबैभन्दा ठूलो दर्शन यही नै हो; यो मानिसले बुझ्ने सबैभन्दा उत्कट इच्छा गर्ने, तर उसका निम्ति धेरै अस्पष्ट कुरा हो। जब तिमीहरू अनुग्रहको युगमा थियौ, त्यस बेला येशूले गर्नुभएको काम वा यहोवाले गर्नुभएको काम के थियो भन्ने तिमीहरूलाई थाहा थिएन। परमेश्‍वरले किन व्यवस्था दिनुभयो, किन उहाँले मानिसहरूलाई त्यो व्यवस्था पालन गर्न लगाउनुभयो वा मन्दिर किन बनाउनुपर्‍यो भनी मानिसहरूले बुझेनन्, र इस्राएलीहरूलाई किन मिश्रबाट उजाड-स्थानमा र त्यसपछि कनानमा लगियो भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्‍ने कुरा त परै जाओस्। आज आएर मात्रै यी विषयहरूलाई प्रकट गरिएको छ।